Kedu uru ịzụrụ ndị debanyere aha YouTube?
Na-agba ndị ọzọ ume ịdenye aha maka ọwa gị
Ndị debanyere aha ga-arapara ma ghara ewepụ ya
Nchekwa na nnyefe siri ike
Nsonaazụ na-amalite n'ime awa 24-72
Nata ebe obula site n'aka ndi ntinye aka nke 10-100 kwa ubochi
Anyị na-anapụta mgbe niile ihe ị nyere iwu!
Ihe kacha mkpa mere ị ga-eji tụlee ịzụrụ ndị debanyere aha YouTube
Na-achọ ịbụ onye YouTuber? YouTube bụ ụlọ ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ihe omume zuru ụwa ọnụ nke na-adọta ọtụtụ ijeri ndị na-ekiri gburugburu ụwa. Ma ị bụ azụmaahịa guzosiri ike, mmalite, ma ọ bụ chọọ igosipụta nka gị, YouTube bụ ikpo okwu zuru oke iji nweta ebumnuche ahịa gị.
Ịbụ YouTuber na-aga nke ọma ga-agụnye iwulite ntọala ndị debanyere aha gị na ịnweta ọnụ ọgụgụ dị elu nke mbak, mmasị na nkọwa. Ọ bụ ezie na metrik dị ka mbata, nlele vidiyo, na nkọwa dị mkpa, ịba ụba ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha gị dị mkpa karịa.
Ịmepụta ọdịnaya dị mma ga-enyere aka, mana vidiyo gị nwere ike lie n'ọtụtụ nde vidiyo ndị yiri ya - ma ọ bụ ka mma nke a na-ebugo kwa ụbọchị na YouTube. N'ikwu nke ọma, a na-ebugo ihe karịrị awa 500 nke ọdịnaya vidiyo kwa nkeji, na a na-ekiri otu ijeri awa ọdịnaya kwa ụbọchị na YouTube.
Ụzọ kachasị ọsọ iji bulie ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha gị bụ zụta ndị debanyere aha YouTube sitere na ụlọ ọrụ mgbasa ozi YouTube a ma ama.
Nke a bụ ilebakwuo anya na ihe na-eme YouTube ka ọ bụrụ ngwá ọrụ ahịa na-ewu ewu yana ihe kachasị mkpa ị ga-eji zụta ndị debanyere aha.
Kedu ihe na-eme YouTube ka ọ bụrụ ngwa ahịa na-ewu ewu?
Nnyocha 2021 sitere na Pew Research Center kpughere na YouTube bụ ikpo okwu kachasị ewu ewu na US, yana ọtụtụ ndị America na-ahọrọ ya karịa ọwa ndị ọzọ.
Kemgbe 2005 mgbe ewepụtara ya, YouTube ewepụtala ọnụnọ siri ike gafee narị mba n'ofe ụwa, na-ekpuchi 95% nke ọnụ ọgụgụ ịntanetị ụwa.
Nke a bụ ụfọdụ eziokwu na ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya nke SEM Rush na-egosi ihe kpatara YouTube ji bụrụ nhọrọ doro anya maka ndị na-ere ahịa:
YouTube ugbu a nwere ndị ọrụ ijeri abụọ kwa ọnwa n'ụwa niile.
A na-elele vidiyo ijeri ise na YouTube kwa ụbọchị nke pụtara otu ijeri awa nke ọdịnaya vidiyo kwa ụbọchị.
Pasent 74 nke ndị okenye America na-ekiri vidiyo YouTube.
Ndị na-ekiri na-etinye nkeji iri anọ na nkezi na vidiyo YouTube.
N'afọ 2022, ihe ruru nde mmadụ 210 ga-elele vidiyo YouTube na US
Ewezuga puku afọ, igwe mmadụ na-eto ngwa ngwa gụnyere ndị gbara afọ 50 ruo 65 (Ndị na-agba nwa) na ndị dị afọ 36 ruo 49 (Generation X).
N'afọ 2019, ijeri mmadụ abụọ n'ofe ụwa na-abanye wee lelee vidiyo YouTube otu ijeri kwa ụbọchị.
YouTube nwere ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ anọ nke okporo ụzọ nkwanye vidiyo ụwa, nke abụọ na Netflix.
Ewezuga ntụrụndụ, ndị mmadụ na-ekiri vidiyo YouTube maka akụkọ, ozi, na-ewusi ọrụ ọkachamara ike, na-eso ụlọ ọrụ na ụdị.
Isii n'ime mmadụ iri na-ahọrọ ikiri vidiyo na TV dị ndụ
Ihe kachasị mkpa iji zụta ndị debanyere aha YouTube
Nweta ewu ewu
Obi abụọ adịghị ya na YouTube bụ otu n'ime ikpo okwu kachasị mma iji gosipụta talent gị ma ọ bụ gbasaa mmata banyere ọrụ gị. 'YouTubers' na-eme nke ọma bụ ụfọdụ ndị ama ama n'ụwa niile. Ma ha na-ekesa vidiyo egwuregwu, vlogs njem, ma ọ bụ 'otu esi eme' vidiyo, ndị YouTube ndị a ewu ewu ewulitela akara ha wee gosipụta ọrụ ha na YouTube. Nzọụkwụ mbụ ịghọ onye na-eme nke ọma YouTuber bụ inweta ewu ewu.
Ụfọdụ ụdị vidiyo kacha ewu ewu na YouTube bụ:
Nyochaa ngwaahịa - Kemgbe 2017, ndị na-ekiri YouTube elelela vidiyo 50,000 gbakwunyere afọ nke nyocha ngwaahịa na ngwaọrụ mkpanaka. Nlebanya ndị tụkwasịrị obi na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkwalite ndị na-azụ ahịa n'ịzụ ahịa. Vidiyo nyocha ngwaahịa na-eme ka ndị na-ege ntị hụ arụmọrụ ngwaahịa wee nweta nzaghachi n'aka onye nyocha.
Meghee vidiyo - Vidiyo na-ebupụ igbe abụrụla nnukwu mmetụta na mkpebi ndị na-ekiri ihe na-azụta. Ha bụkwa ụzọ dị irè maka ụdị iji gbasaa mmata maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọhụrụ ha.
Vidio Mmụta - Ndị na-ekiri vidiyo YouTube hụrụ n'anya gbasara usoro ejiji, nka a na-ahụ anya, akụkọ ihe mere eme, mgbakọ na mwepụ, azụmahịa na isiokwu ndị ọzọ.
Bido vidiyo - Site na 'Ihe ịma aka Highlighter' ruo "ihe ọchị na eziokwu gbasara m," mkpado na vidiyo ịma aka na-ewu ewu nke ukwuu. Usoro vidiyo a na-agba ndị ọrụ ume ka ha lelee ndị okike na-eme ihe ịma aka ahụ n'ụzọ pụrụ iche.
Comedy - Vidiyo na-atọ ọchị so n'ụdị nwere nnukwu ohere iru ọkwa 'viral'.
Ịgba Cha Cha - Site na 'Minecraft' ruo 'League of Legends', vidiyo egwuregwu bụ otu ama ama na YouTube.
Vlogs - Vlogs ma ọ bụ blọọgụ vidiyo na-enye ndị na-eso ụzọ aka ịhụ 'ezigbo' gị wee jikọọ gị. Ndị vloggers kacha nwee ọtụtụ nde ndị debanyere aha.
Ọbụlagodi mgbe ị na-eme vidiyo dị elu na niche gị wee bipute ya, enweghị nkwa maka ịga nke ọma ozugbo. Ọ nwere ike ịdị ka YouTubers viral nwere usoro anwansi, nke na-eme ka ama ama ịntanetị ozugbo. Ha na-edekọ vidiyo na biputere, ọtụtụ nde nlele na ndị debanyere aha na-eso. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike na-arụ ọrụ maka ndị ama ama na ọwa ndị a ma ama, ndị mbido ga-achọ ịmalite ịmalite ịmalite site n'ịzụta ndị debanyere aha YouTube.
A na-ewere vidiyo YouTube dị ka "dị mma" ma ọ bụrụ na ọ nwere CTR (ọnụego pịa-site) karịa pasent 10, njide pasent 50, yana nkeji anọ nke oge nlele.
A na-agbakọ ọnụego pịa-site ma ọ bụ CTR site n'ikesa ọnụọgụ ọpịpị na vidiyo gị site na mmetụta thumbnail (vidiyo teaser). Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na a na-elele thumbnail vidiyo gị ugboro 1,00 na mmadụ 10 pịa vidiyo ahụ, ọnụego ịpị-site bụ pasent 10.
Ka ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha na akaụntụ YouTube na-abawanye, ohere ahụ ka mma ịkwalite CTR, njide, na oge nche.
Dabere na atụmatụ, ọ nwere ike were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ iji nweta ndị debanyere aha mbụ gị na YouTube. Nke a nwere ike ịbụ ahụmahụ na-adịghị ngwa ngwa na nke na-akụda mmụọ maka ndị na-achọ ngwa ngwa ime akara ha na ọwa.
Mgbe ịzụrụ ndị debanyere aha YouTube, ị nwere ike wulite ma kwadoo ike. Ịzụta ndị debanyere aha YouTube ga-ezigakwa ndị ọrụ YouTube ndị ọzọ ozi na ọdịnaya gị bụ ewu ewu yana bara uru.
Ozugbo ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha gị na-abawanye, ọ ga-adọta ọtụtụ mmadụ ka ha lelee vidiyo gị wee denye aha na ọwa gị.
Gaa mkpanaka iji gbasaa iru gị
Ị nwere atụmatụ ịre ahịa ọwa ọtụtụ ọwa? Ịre ahịa mkpanaka bụ atụmatụ ahịa dijitalụ nke ezubere irute ndị na-ege ntị na ngwaọrụ mkpanaka, gụnyere mbadamba na smartphones. Statista na-eme atụmatụ na enwere nde 290 ndị America bụ ndị ọrụ ekwentị na 2020 ka ọ dị ugbu a. Nyere ntinye ekwentị nke pasent 79.10, US bụ nke anọ n'ụwa n'ihe gbasara ndị nwe ekwentị.
Ebe ndị ahịa na-atụgharị uche ha na ngwaọrụ mkpanaka, ndị na-ere ahịa na-ebute ụzọ itinye aka na omnichannel na ndị na-ege ha ntị na ahịa mkpanaka. Ịre ahịa ekwentị nwere ike ịgụnye izipu ozi ika site na SMS ma ọ bụ oku oyi. Atụmatụ ịre ahịa na-akwali nwere ma ndọghachi azụ ogologo oge na nke dị mkpụmkpụ. Ndị ahịa nwere ike igbochi oku na ịkwanye mgbasa ozi ngwa ngwa. Maka ndị na-ere ahịa, nleba anya nloghachi na itinye ego na ịchụpụ otu ndị ahịa na-esi ike site n'ịre ahịa.
YouTube dabara nke ọma maka ụzọ mbubata ma ọ bụ dọpụta ahịa na ngwaọrụ mkpanaka. Site na ịre ahịa inbound, ụdị nwere ike itinye aka na ịkpọ ndị ahịa ha lekwasịrị anya ma wulite mmekọrịta siri ike.
Ọnụọgụ ndị a HubSpot gosipụtara ihe kpatara YouTube ji bụrụ nhọrọ ziri ezi maka ire ahịa mkpanaka:
Ọtụtụ ndị okenye (pasent 75) na-ekiri vidiyo YouTube na ngwaọrụ mkpanaka ha.
YouTube na-erute ọtụtụ ndị mmadụ n'ime afọ 18 ruo 49 na ngwaọrụ mkpanaka n'ime otu izu ma e jiri ya tụnyere netwọkụ USB ọ bụla.
Ihe karịrị ụzọ anọ n'ụzọ anọ nke oge nlele YouTube dị na ngwaọrụ mkpanaka.
Nnyocha Google na-egosi na ndị ọrụ smartphone nwere ike ịṅa ntị na ọdịnaya ma ọ bụ mgbasa ozi na YouTube ugboro 1.4 karịa.
Ndị ọrụ nyocha chọpụtakwara na ndị na-ekiri vidiyo smartphone na-enwekarị mmetụta njikọ na ụdị ndị na-enye ọdịnaya vidiyo na ngwaọrụ mkpanaka ma e jiri ya tụnyere ndị na-ekiri TV. Na nke kachasị, ọmụmụ 2020 gosiri na pasent 70 nke ndị na-ekiri zụrụ mgbe ha hụchara vidiyo ika ahụ na YouTube.
Omume ndị ọzọ ndị na-ekiri na-eme mgbe ha lechara vidiyo nwere akara na ngwaọrụ mkpanaka ha gụnyere:
Gaa na webụsaịtị ma ọ bụ ụlọ ahịa ika.
Kwuo banyere ika na ndị ọzọ.
gbanwee echiche ha nke ọma gbasara ika, ọrụ, ma ọ bụ ngwaahịa.
Kekọrịta ọdịnaya vidiyo nwere akara gbasara ọrụ, ngwaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Ụzọ mara mma nke ịmepụta atụmatụ ịre ahịa mkpanaka na-emeri bụ ịmepụta vidiyo akara ngosi na YouTube ma kwalite ha na ọha mmadụ site n'ịzụta ndị debanyere aha YouTube. Ndị mmadụ na-eleba anya maka akara iji kpebie ihe ha ga-ekiri na mgbasa ozi ọha na eze na ụdị ọdịnaya kwesịrị oge ha. Ọ bụrụ na akaụntụ YouTube gị nwere puku kwuru puku ndị debanyere aha, ọ pụtara dị ka akaụntụ ama ama nke ọtụtụ mmadụ na-eso.
Gbakwunye mbọ ịre ahịa gị
Maka ụdịdị, ịnwe atụmatụ ịre ahịa YouTube bụ ihe kacha mkpa. Vidiyo na-etinye aka na-enyere aka ịkwalite ebe nchekwa na icheta n'ihi na a na-ahazi ihe onyonyo ngwa ngwa ma e jiri ya tụnyere ozi ederede. Vidiyo YouTube nwekwara ike inyere azụmahịa gị aka ịkwaga okporo ụzọ na webụsaịtị gị ma ọ bụ ụlọ ahịa e-azụmahịa, na-abawanye mgbanwe ma rute ebe ndị na-ege ntị sara mbara. Inwe ọnụnọ YouTube na-emekwa ka ọ dịrị ndị na-ege gị ntị mfe ịchọta gị na igwe nchọta. Ị nwere ike iji iyi ndụ YouTube gbasaa ihe omume ndụ. Nke a na-ekpughere ndị na-ege ntị ka ukwuu ika na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị n'ụzọ dị ọnụ ahịa.
Atụmatụ ịre ahịa YouTube gị nwere ohere dị elu nke inye gị nsonaazụ achọrọ mgbe ị nwere ntọala ndị debanyere aha siri ike.
Ịzụta ndepụta ndị debanyere aha YouTube bụ ụzọ dị mma isi gbakwunye mbọ ịre ahịa YouTube gị. Ọ na-enyere gị aka inweta ndị na-eso ụzọ ọhụrụ n'oge adịghị anya wee nweta mmasị, nkọwa na òkè. Site na ndị debanyere aha ndị ọzọ, ị nwere ike wulite ndepụta email sara mbara nke na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịbawanye mgbanwe na ntinye aka.
Ndepụta ndị debanyere aha na-enye ụzọ na-ekpo ọkụ nke ị nwere ike itinye aka na nsonye, ​​tinye aka ma mechaa ghọọ ndị ahịa. Ọnụọgụ ndị debanyere aha YouTube bụ otu n'ime ihe dị mkpa ọkwa ọkwa. Ịzụta ndị debanyere aha YouTube na-arụsi ọrụ ike na-enyere azụmahịa gị aka inweta amara karịa. Ka ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha gị na-abawanye, ka aha gị na ntụkwasị obi gị na-esiwanye ike nke nwere ike dọta ndị debanyere aha organic na ọwa gị.
Otu n'ime ihe kpatara ọtụtụ mmadụ ji malite ọwa YouTube bụ iji kpata ego. Ọnụọgụ ọwa na YouTube na-enweta ọnụọgụ isii kwa afọ ejirila pasentị 40 rịa elu kwa afọ ebe ọwa na-enweta $10,000 kwa afọ tolitere site na pasentị 50.
Ọtụtụ YouTubers na-eme nke ọma na-enweta ego ọnụọgụ isii na YouTube. Dịka ọmụmaatụ, ego onwe YouTuber Nate O'Brien nwere ndị debanyere aha nde 1.1 wee nweta $444,000 na ego mgbasa ozi n'ime otu afọ. Kpakpando YouTube kachasị elu dịka PewDiePie na Smosh na-enweta ebe ọ bụla site na nde $8.5 ruo nde $12.
Iji malite ịkpata ego na YouTube, ị ga-achọ ịnwe opekempe puku ndị debanyere aha n'ime ọnwa iri na abụọ gara aga yana awa elekere 4000 ọha. Mgbe ị nwetara ọtụtụ ndị debanyere aha, ị ga-eru eru maka Mmemme Mmekọ nke YouTube na-enye. Nke a na-enye gị ohere ịnweta ego site na ndenye aha, mgbasa ozi, ire ahịa, na ndị otu ọwa.
Google AdSense: Mmekọrịta ahụ na-enye gị ohere ịnweta ngwaọrụ na-enye gị ohere iji Google AdSense mee vidiyo gị. Ọtụtụ ndị na-eme ememme YouTube na-enweta nnukwu ego ha na-enweta site na Google AdSense. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere ndị debanyere aha 1,000,000 na-ekiri vidiyo gị abụọ n'otu izu, ị nwere ike irite ihe ruru $36,000 site na AdSense naanị.
N'ime atụmatụ, nlele 20,000 kwa ụbọchị nwere ike inyere gị aka irite n'etiti $28 ruo $47 kwa ụbọchị na nkezi, na-enweta kwa ọnwa bụ $460 ruo $769. Ọ bụrụ na ọnụọgụ nlele kwa ụbọchị na-adịgide adịgide, ị nwere ike irite $5,600 ruo $9,353 kwa afọ.
Ngwa ahịa ahia: Ndị mmekọ YouTube nwere ike ree ngwa ahịa iri na abụọ site n'ịkwalite njirimara a na akaụntụ YouTube. Ụfọdụ ndị ama ama emela nde mmadụ na-ere ahịa nye ndị na-akwado ha. PewDiePie, kpakpando egwuregwu vidiyo Sweden, nwere ndị debanyere aha nde 98 na YouTube ma na-eme $6.8 nde kwa ọnwa site na ire ngwa ahịa. Ị nwekwara ike ịkwalite ngwa ahịa/ngwaahịa gị na ọwa gị.
Mmemme ọwa: Mgbe ị nwetara ndị debanyere aha 1000 na ọwa YouTube gị, ị nwekwara ike nweta ego site n'ịkwalite njirimara otu ọwa na akaụntụ gị. Ndị na-eso ụzọ gị na ndị na-akwado gị na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa iji nweta ọdịnaya ego, gụnyere nkata ndụ, vidiyo pụrụ iche na baajị. Ndị na-emepụta vidiyo kacha elu na YouTube na-enweta $40,000 kwa ọnwa site na ndị otu ọwa.
Ịzụ ahịa ahịa: Dabere na niche gị, ị nwekwara ike iji ahịa ndị mmekọ, nkwado, na ọmụmụ ihe n'ịntanetị gbanwee isi mmalite nke ego gị. Ndị ọchụnta ego na-akwụ YouTubers ezigbo ego na-eso iji kwalite akara ha ma ọ bụ ngwaahịa ha na ọwa. Ndị okike YouTube ama ama na-ewu ewu, ma ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma n'ịkwalite mmata ika ma e jiri ya tụnyere ndị ama ama na ndị na-eme ihe. Ndị na-emetụta YouTube na-enyekarị ọnụ ahịa dị elu iji kwalite ụdịdị ma e jiri ya tụnyere posts Instagram. Ị nwere ike irite $2000 kwa vidiyo ma ọ bụrụ na ị nwere ndị debanyere aha 100k.
Dị ka otu nnyocha si kwuo, onye na-eme ihe n'etiti etiti na-ana $2,000 maka ndị debanyere aha 100,000 iji kwalite akara na akaụntụ YouTube ha.
Dọrọ ezigbo ndị debanyere aha
Ndị na-ere ahịa na-eji ihe a maara dị ka 'echiche ìgwè ehi' iji kwalite ahịa na itinye aka. Echiche ìgwè atụrụ na-ezo aka n'otú ndị ọzọ si emetụta ndị mmadụ ime ihe n'ihi na ọtụtụ ndị na-eme ya.
Dị ka ụmụ anụmanụ na-elekọta mmadụ, anyị na-adabere na ozi sitere na ndị ọzọ iji mee mkpebi. Site na nhọrọ ọrụ, ọchịchọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ruo na wardrobes, ọchịchọ anyị na-emekarị site na nlele mmekọrịta anyị. Ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ mụrụ otú atumatu mmụta mmekọrịta ọha na eze si akpụzi ọgụgụ isi nke mmadụ.
Ha chọpụtara na ndị mmadụ na-eṅomi ndị ọzọ, na ka ọnụ ọgụgụ ndị mere otu nhọrọ, otú ahụ ka ndị ọzọ na-eṅomi ha. Nke a bụ otu ụzọ ndị mmadụ si ahọrọ ngwa dabere na ọnụọgụ nbudata ha ma ọ bụ soro akaụntụ mgbasa ozi ọha nwere nnukwu ihe na-eso ya. Ọ bụkwa eziokwu na mgbe ndị mmadụ na-achọ ma chọta vidiyo nwere ọtụtụ ndị debanyere aha, echiche na mmasị, ha na-ekpebi iso vidiyo ahụ. Mgbe ndị na-ekiri ihe na-ahụ na ike vidiyo dị ala, ha na-eche na ọdịnaya ahụ abaghị uru ikiri. Ha nwere ike ịga n'ihu ngwa ngwa wee chọọ vidiyo yiri ya site na ọwa YouTube a ma ama nke nwere nlele ka ukwuu.
Enweghị ndị debanyere aha maka ọwa YouTube gị ga-ebelata ohere nke vidiyo gị ịnweta mmasị, nkọwa ma ọ bụ òkè dị ka ndị na-ekiri ejighị n'aka ma ọ bụ isi iyi ozi a pụrụ ịtụkwasị obi. Mgbe ị na-akwụ ụgwọ maka ndị debanyere aha, ị ga-emeziwanye ohere nke ndị ọzọ na-aghọ ndị na-eso ụzọ gị na ndị debanyere aha nanị n'ihi 'ìgwè ehi.'
Mepụta onwe gị dị ka onye ọchịchị
Otu n'ime ihe dị mkpa iji zụta ndị debanyere aha YouTube bụ ịkwalite ikike ika / ika gị. Inwe ọtụtụ ndị debanyere aha na ọwa YouTube gị na-egosi na ị bụ ezigbo onye ọkpụkpọ na niche ma e jiri ya tụnyere ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha. Dịka e gosipụtara n'elu, onye na-edeba aha buru ibu na-emepe gị ohere iji nwetakwu ego, soro ndị ọkachamara na ndị na-eme ihe ike na-arụkọ ọrụ.
Dika nyocha nke 2019 sitere na SEM rush, pasenti 48 nke ndi mmadu kwenyere na YouTube ga-abụ onye kacha enye aka iji kwalite nrụpụta nke nkwukọrịta mmekọrịta ọha na eze n'ime afọ ise na-abịa. Ma niche gị dị na PR, ejiji, nlekọta anụ ahụ, ego, egwuregwu, ma ọ bụ ihe ọchị, inweta ọtụtụ ndị debanyere aha na YouTube nwere ike inyere gị aka guzobe onwe gị dị ka ọkachamara ụlọ ọrụ.
Ndị debanyere aha na-ekere òkè dị mkpa na ịga nke ọma gị dị ka YouTuber. Site na ohere ịkpata ego, ịgbasa iru, inweta ewu ewu na ịkparịta ụka n'Ịntanet, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị debanyere aha na-enye ọtụtụ uru. Maka ndị ọhụrụ batara n'elu ikpo okwu, ịnweta ndị debanyere aha na ịmepụta ntụkwasị obi nwere ike bụrụ ihe ịma aka. Ọ chọrọ mgbalị na-agbanwe agbanwe ka ọ na-ewe oge iji nweta ndị na-eso ụzọ 1000 mbụ gị. Dị ka ọmụmụ na-egosi, ọ nwere ike were ihe dị ka afọ abụọ iji nweta otu puku ndị debanyere aha.
Ịkwalite ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha YouTube nwere ike ịgụnye ịṅa ntị nke ọma na ịdịmma vidiyo, bulite ugboro ole, njikarịcha search engine (SEO) iji kwalite ọkwa ọchụchọ vidiyo gị na atụmatụ ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na mbọ ndị a dị mkpa, ị ga-ewepụta oge dị ukwuu iji nweta akụkụ niile nke vidiyo YouTube gị nke ọma. N'agbanyeghị ịme vidiyo dị elu, na-etinye aka, enwere ike ọ gaghị enwe ọtụtụ ndị debanyere aha maka afọ ole na ole mbụ.
Mgbe ịzụrụ ndị debanyere aha, ọ ga-enyere aka wulite ntọala ndị na-eso ụzọ gị n'oge ngwa ngwa yana obere mbọ. Kama ichegbu onwe gị banyere ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha gị, ị nwere ike ilekwasị anya n'ịmepụta vidiyo ọhụrụ na-adọrọ mmasị na-amasị ndị na-ege gị ntị.
Dị ka Aherfs si kwuo, ogo dị elu na ibe ọchụchọ Google na YouTube bụ ihe kacha mkpa maka ndị na-ere ahịa dijitalụ n'ihi na:
Pasent 68 nke ahụmịhe ịntanetị na-amalite site na nchọta ọchụchọ - ndị mmadụ nwere ike ịhụ vidiyo gị ma ọ bụrụ na ị nọ n'ọkwá dị elu na igwe nchọta.
Pasent 75 nke ndị na-achọ Google anaghị agabiga nsonaazụ ibe mbụ, naanị pasentị 0.78 nke ndị ọrụ pịa nsonaazụ ọchụchọ na ibe nke abụọ.
Enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ime iji kwalite ọkwa vidiyo YouTube gị na Google. Ndị a gụnyere ịchọta na iji mkpụrụokwu ziri ezi (ndị a bụ okwu ndị na-ege gị ntị na-eji achọ ọdịnaya yiri nke gị), na-agbakwunye mkpado YouTube, na ịkwalite ogo vidiyo YouTube gị. Otú ọ dị, ụzọ kachasị ngwa ngwa bụ ịkwalite ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha gị.
Dị ka Neil Patel si kwuo, YouTube kwadoro vidiyo dabere na:
Number nke echiche
Ntụkwasị obi na-ejikọta ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha nke ọwa YouTube nwere na-abụghị echiche na ikike. Nnyocha na-egosi na ọnụọgụ mmasị, nlele, nkọwa na nkesa vidiyo YouTube nwere njikọ siri ike na ọkwa YouTube dị elu. Otu ihe dị mkpa mere ị ga-eji kwụọ ụgwọ maka ndị debanyere aha YouTube bụ na ị nwere ike ịbawanye mmasị, nlele na nkọwa na vidiyo gị site na ịnweta ndị debanyere aha n'ezie na ịgbasa iru eru gị.
Ọwa YouTube nwere ọtụtụ ndị debanyere aha na-enweta ntinye ụzọ na ọchụchọ ndị emere na Google na saịtị na YouTube. Ọnụọgụ ndị debanyere aha bụkwa isi ihe algọridim YouTube na-eji ahazi vidiyo. Mgbe ịza ajụjụ ma ọ bụ mmasị bụ omume otu oge, ndenye aha na-egosi na ndị mmadụ ga-ahụ ọdịnaya vidiyo ị na-emepụta mgbe niile. Nke a na-arụ ọrụ bụ isi n'igosipụta uru ị na-enye maka YouTube.
Nke a bụ ihe mere ọtụtụ ndị YouTubers ji akwado ndenye aha.
N'agbanyeghị ebe ndị debanyere aha gị si, inwe ọtụtụ ndị debanyere aha ga-enyere aka ịkwalite SEO gị. Nke a na-eme ka a hụ ma hụ vidiyo gị site na nnukwu ndị na-ege ntị. N'ihi ya, ka ọnụọgụ ndị mmadụ na-elele ọdịnaya gị, ka mmụba nke ndị debanyere aha organic maka ọwa YouTube gị na-abawanye.
Ịrịọ ndị mmadụ ka ha hapụ nkọwa ga-arụkwa ọrụ iji kwalite ọkwa vidiyo gị na YouTube. Ịmepụta ntọala ndị debanyere aha gị bụ nzọụkwụ mbụ iji nweta usoro ndị a iji nweta ọkwa dị elu.
Jikọọ ndị debanyere aha gị
Inwe ezigbo ndị debanyere aha na-akwalite ntụkwasị obi gị mgbe ị na-amalite dị ka YouTuber. Nke a dịkwa maka ndị na-eke vidiyo YouTube ruo oge ụfọdụ mana enweghị ike wulite ntọala ndị debanyere aha ha.
Ozugbo ị nwere nnukwu ego nke ndị debanyere aha na nlele, ị ga-enwe mmetụta nke itinye ọdịnaya ọhụrụ mgbe niile. Mepụta vidiyo na nka, egwu, njem, nri ma ọ bụ ọrụ gị iji tinye ndị debanyere aha gị n'ezie.
Ị nwere ike mee vidiyo nkeonwe iji nabata ndị debanyere aha gị n'ezie ma mee ka ha nwee mmetụta bara uru na pụrụ iche. Ịtinye akara mmiri mbụ na vidiyo gị agaghị echekwa vidiyo gị naanị mana mee ka ndị na-ekiri ya pịa ya wee denye aha na ọwa gị. Bọtịnụ ịdenye aha na-egosi na-akpaghị aka na akara mmiri mbụ gị.
Ịbanye ndị debanyere aha gị ga-agụnye ime vidiyo na-amasị ha. Nke a bụ ụfọdụ ọnụ ọgụgụ HubSpot na-egosi ụdị ọdịnaya ndị na-ekiri YouTube na-amasị:
Vidiyo egwu bụ otu n'ime ndị kacha ewu ewu na YouTube.
Vidio ndị metụtara ịzụ ahịa nwere oge elekere ugboro ise karịa n'oge na-adịbeghị anya.
YouTube na-eme ka pasent 70 nke ndị na-ekiri mara maka ụdị.
Ndị na-ekiri nwere ike ịzụta ngwaahịa ha lere na YouTube okpukpu abụọ.
Tụnyere nyiwe ndị ọzọ, ndị na-ekiri nwere ike ịchọ ozi gbasara ọrụ, ngwaahịa, ma ọ bụ akara na YouTube.
Vidiyo nkuzi na YouTube bụ ndị ọrụ YouTube na-ahọrọ karịa ịgụ akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ ntuziaka ngwaahịa.
Isi ihe mere ị ga-eji na-ekiri YouTube bụ inwe ahụ iru ala na ahụ iru ala.
Vidiyo izu ike dị ka igbutu ncha nwere mmụba pasent 70 n'oge nche.
Vidiyo na-atọ ọchị na “otu esi eme” bụ ụdị ọdịnaya YouTube ndị ọzọ ewu ewu.
Na-abawanye algọridim YouTube
Algọridim YouTube akọwapụtara nke ọma ma kpebie ihe dị ka ụzọ atọ n'ụzọ anọ nke vidiyo ndị na-ekiri YouTube na-ekiri. Ndụmọdụ YouTube gbadoro ụkwụ na ọtụtụ metrik dị ka ndị debanyere aha, akụkọ ihe nlere anya, oge nlele, mkpa ọ dị na itinye aka. Isi ihe mere ị ga-eji zụta ndị debanyere aha bụ na algọridim nwere ike ịtụ aro vidiyo gị nye ndị na-ekiri ihe.
Ịzụta ndị debanyere aha YouTube dị mfe na ngwa ngwa
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere nsogbu nke ịchọta saịtị ziri ezi ịzụta subs, ebe a bụ ngwọta dị mfe. YTpals bụ saịtị na-eduga na zụta ndị debanyere aha YouTube. Ị nwere ike ịtụ anya nsonaazụ ngwa ngwa yana usoro ịzụrụ ihe. Ị nwere ike ịzụta ndị debanyere aha YouTube 50 mbụ maka ihe dị ka $20, ebe nlele 5000 na-akwụ ụgwọ na $60.
Ị nwekwara ike ịhọrọ nlele YouTube n'efu iji soro ụzọ gị ngwa ngwa iji wuo ntọala ndị debanyere aha gị, mmasị, nkwupụta na òkè.
YTpals nwekwara ọnụahịa asọmpi maka mmasị YouTube, nkọwa, awa elekere, na òkè nke nwere ike ịkwalite atụmatụ ịre ahịa YouTube gị. Mgbe ị na-akwụ ụgwọ maka ndị debanyere aha, ị ga-amalite ịnata ha n'ime awa 24. Ozugbo ị hụrụ uru a na-ahụ anya nke ịnweta ndị debanyere aha na YouTube, ị nwere ike jiri nwayọọ nwayọọ mụbaa ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha ruo 100, 500, ma ọ bụ karịa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta nkọwa, YTpals na-enye nkọwa omenala maka ọnụego ọnụ ala. Ị nwere ike ịzụta nkọwa omenala iri ozugbo maka vidiyo YouTube gị nke ị bugoro maka ọnụ ala dị ala. Ị nwekwara ike ịzụta okwu 30 ma ọ bụ 50 na ọnụ ahịa asọmpi. A bịa na mmasị, YTpals na-enye mmasị YouTube 200 maka $20.
Ịzụta ha niile dị ka ngwugwu ga-enye ntọala siri ike ịchọrọ iji were ọwa YouTube gị gaa n'ọkwa ọganiihu ọhụrụ.
Hụ ihe ndị ahịa anyị na-ekwu mgbe ha zụrụ ndị debanyere aha YouTube